Naseho ny : 25 jolay 2020
Teo anatrehan'izany adihevitra nafana dia nafana izany no nanontanian'ny filoham-pokontany izay mba hevitr'i Dera, saingy nambarany tsy am-pihambahambana fa tsy manan-kevitra ankoatra izay efa niaraha-nandre teo izy.
Naseho ny : 24 jolay 2020
Nentanim-po avokoa ny mpandray anjara rehetra tao anaty fivoriana, ka tonga hatrany amin'ny fifampihantsiana teo amin'ny samy lehilahy ny resaka. Ny vehivavy moa dia mahatsiaro tena ho very zo tanteraka.
Naseho ny : 23 jolay 2020
Nanatrika fivoriambem-pokonolona i Dera taorian'ny nandehanan'izy ireo nanao batsia an'i Rivo tany Ambatomainty, noho ny tsy fandriampahalemana sy ny horohoro iainan'ny vehivavy eto an-drenivohitra.
Naseho ny : 22 jolay 2020
Tao anatin'ny korana niaraha-nanatrika tamin'ny batisan'i Rivo no nipoiran'ny fandrisihana an'i Dera hianatra hitory teny. Ny rainy no tompon-kevitra tamin'izany.
Pejy 5 amin'ny 66